White wuxuush wuxuush SEO | Martech Zone
White Hat wuxuush of SEO
Talaado, July 3, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Had iyo jeer way fiicantahay in la arko waxoogaa maad ah oo loo isticmaalay shaxanka qaarkood. Waana wax si gaar ah u wanaagsan in la arko kuwa ka shaqeeya warshadaha oo riixaya dhaqamada waaweyn ee SEO. Intaas ayaan iri SEO waa dhintay oo infographic-kan ayaa si dadban ula hadlaya. Xaqiiqdu waxay tahay haddii aad leedahay barxad adag oo soo bandhigaysa waxa ku jira si habboon, SEO waa qaybta ugu fudud ee isla'egta tough qaybta adag waa qorista waxyaabo ku kalifaya oo ay dhagaystayaashaadu la wadaagayaan.
Sawir-gacmeedkan laga soo qaaday Smuggecko wuxuu tilmaamayaa mid kasta oo ka mid ah… aka wuxuush… ee istiraatiijiyaddaada SEO iyo sida ay u shaqeeyaan si loo hubiyo in waxyaabaha aad ka kooban tahay ay yihiin kuwa ugu fiican.
Tags: infographicSEO infographicxayawaan seoKoofiyad cadkoofiyad cadcaddaan
Maxay suuqyadu u baahan yihiin inay ka ogaadaan HTML5
Jul 3, 2012 markay tahay 12:23 PM
Waan ku faraxsanahay inaad aragto dad ku raaxeysanaya muuqaalkan muuqaal. Waxaan ku raaxeystay farxad badan sameynta. Waxaa jira mid kale oo ku socda jidkiisa oo eegaya dhinaca sharka ee SEO.
Jul 3, 2012 markay tahay 5:06 PM
Waxaan rajeyneynaa inaan arko sharka, sidoo kale! U hubso inaad ku darto bahallada iibiya SEO laakiin dhab ahaantii waxay dib ugulaabanayaan iyagoo aan ogeyn macaamilka Kuwaasi waa ragga runtii i gubaya!
Jul 3, 2012 markay tahay 7:18 PM
Waxaan abuuri doonaa infographic gebi ahaanba gooniya, oo si toos ah loogu talagalay xulashada shirkadda saxda ah ee SEO. Laakiin taasi waa usbuuca soo socda 🙂
Sep 20, 2012 at 10: 33 PM
Muujinta nooc gaar ah oo seo. waxtar badan ii leh. shaqo fiican.